भर्खरै आयो प्रचण्ड पत्नी सिताको यस्तो खबर – PathivaraOnline
Home > समाचार > भर्खरै आयो प्रचण्ड पत्नी सिताको यस्तो खबर
भर्खरै आयो प्रचण्ड पत्नी सिताको यस्तो खबर
admin November 13, 2018 समाचार 0
बेनी नगरपालिका–४ मा रहेको तातोपानी कुण्डमा नसासम्बन्धी रोगबाट पीडित दाहाल पत्नी दाहाललाई उपचार गराउन ल्याइएको छ ।
आज दिउँसो हेलिकप्टरमार्फत अर्थुङ्गेस्थित नेपाली सेनाको गणमा अवतरण गराइएपछि सवारी साधनमार्फत बेनी हुँदै दाहाल दम्पती तातोपानी कुण्डमा पुग्नुभएको थियो । सो टोलीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उहाँकी पत्नी नैनकला, अध्यक्ष दाहालकी छोरी गङ्गालगायत सहभागी छन् ।
प्राकृतिक चिकित्सालयका रुपमा परिचित तातोपानी कुण्डमा शरीर डुबाएर सीताको उपचार गराउन शुरु गरिएको छ । सीतालाई यसअघि सिङ्गापुर लगेर उपचार गरिएको थियो । तातोपानी कुण्डमा स्नान गरेमा नसासम्बन्धी समस्या हल हुने थाहा पाएपछि उहाँलाई यहाँ ल्याइएको अध्यक्षका निजी सचिव जोगबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो ।
पहिलो दिन सीतासहितको टोलीले नै तातोपानी कुण्डभित्र करीब साढे १ घण्टा स्नान गरेको छ । उहाँलाई बेनीस्थित एक होटलमा बसेर केही दिन नियमित रुपमा कुण्डमा पुगेर स्थान गरी उपचार गराइने व्यवस्था मिलाइएको छ । अध्यक्षको कार्यकर्ता भेटघाट लगायतका कार्यक्रमसमेत तय गरिएको नेकपाका नेता एवम् पूर्वसांसद गोविन्द पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
नेकपा अध्यक्ष दाहाल र गृहमन्त्री थापाका परिवारका अन्य सदस्यहरुसमेत सहभागी सो टोली तीन दिनसम्म म्याग्दीमै रहनेछ । सो क्रममा तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल, गृहमन्त्री थापासहितको टोलीलाई स्वागत गरेका थिए । नेकपाका नेताहरुले समेत बेनीस्थित होटलमा अध्यक्ष दाहाल र गृहमन्त्री थापालाई स्वागत गरेका छन् ।
एक मात्र छोरा प्रकाशको निधन पछि प्रचण्ड पत्नी सिता बिरामी अवस्थामा रहेकी छिन् ।
यी हुन् अभिनेता राजेश हमालका आफ्नै ३ दिदीबहिनीहरु, जो नेपाल देखि अमेरिकासम्म ठुला डाक्टर छन् – तस्वीर सहित हेर्नुहोस
प्रधानमंत्रीको पुत्ला जलाउदा भयो यो हालत – तस्विर सहित हेर्नुहोस
यसरी मनाइयो टुँडिखेलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस २०७८! फोटो फिचर सहित हेर्नुहाेस्
नेपालकै गाैरव राजधानी–तराई–मधेश जोड्ने द्रुतमार्ग अब यस्तो बनाइने!
बिजय शाहले गरे चमत्कार: १३ जनालाई सिकाए फर्मुला, विद्यार्थीले क्यामराकै अगाडी गरे लाइब डेमो (हेर्नुस् भिडियो)